Yiziphi izici zokubekwa phansi kwe-pvc? - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Yiziphi izici zokubekwa phansi kwe-pvc?
Hlela: UDenny　2019-12-03　Iselula
Isakhi esiyisisekelo se-PVC flooring yi-polyvinyl chloride, bese kunezelwa ezinye izakhi ukuqinisa ukumelana kwayo nokushisa, ukuqina nokuqina .Uthandwa kakhulu ngumphakathi ngokuhlobisa futhi kuyinto ethandwa kakhulu yokwenziwa namuhla.
Ukufakwa phansi kwe-PVC kubuye kube uhlobo lweplastiki. Iphansi lepulasitiki libizwa ngokuthi isigaba esikhulu, esihlanganisa ne-PVC floor, empeleni, kungashiwo ukuthi phansi nge-PVC elinye igama.
Ingxenye eyinhloko i-polyvinyl chloride ezibonakalayo. Ukufakwa phansi kwe-PVC kungenziwa ngezinhlobo ezimbili. Eyodwa ayinangqondo futhi esobala, kanti nezinto zephethini kusuka phansi kuya phansi ziyefana. Olunye uhlobo lwenhlanganisela, okungukuthi, ungqimba oluphezulu ungqimba olusobala lwePVC, kanti ungqimba lokuphrinta kanye nolwelwesi lwegwebu lufakwa ngezansi. "Ukufulela phansi kwepulasitiki" kusho ukufakwa phansi komhlaba okwenziwe nge-polyvinyl chloride.
Zihlobene nemikhiqizo esezimakethe, kunezinto eziningi zokwakha, ezifana nemikhiqizo ye-PVC emakethe, ayigcini ngokuthula imvelo kuphela, kodwa futhi ukusebenza kwayo kwezindleko kuphezulu kakhulu, ukugcinwa kulula kakhulu. Njengamanje, i-PVC engenayo i-glue floor ingahlukaniswa ngezigaba ezintathu: ukukhiya, uzibuthe, kanye ne-glue-free. Lolu hlobo lokwenza phansi linciphisa izindleko zokufaka futhi luvumela abasebenzisi ukuthi bazijabulele bona. Ngaphezu kwalokho, lezi zinhlobo ezimbili zokuphaka phansi kwe-PVC, ukuzicwila nokunganamatheli, ziluhlobo lwezinto ezibonakalayo eziphansi "ezingahanjiswa". Zingahanjiswa nomnikazi, ngoba lokhu kuphansi akunamatheli, okukulungele ukususa nokuhambisa, kuphinde kuvulwe kabusha. .
Umphumela wokubekwa phansi kwe-PVC ubuye uthandwe kakhulu ngumphakathi futhi manje usetshenziswe kabanzi kumaphrojekthi wokuhlobisa angaphandle. Selokhu kwangena imakethe yezasekhaya ngeminyaka yama-1980s, sekukhuthaziwe ukukhuthazwa kwezentengiselwano (izakhiwo zamahhovisi, izinxanxathela zezitolo, izikhumulo zezindiza,), ezemfundo (izikole, imitapo yolwazi, izinkundla zezemidlalo), ezemithi (izitshalo zemithi, izibhedlela), amafektri kanye nezinye izimboni ezisetshenziswa kabanzi, kanti nemiphumela egculisayo isitholile. , Ukusetshenziswa kuyanda usuku nosuku.
Yiziphi izici zokubekwa phansi kwe-pvc? Okuqukethwe okuhlobene
Okokuqala, ukuqina phansi kokhuni Akunakusho ukuthi, ukubeka phansi izinkuni okuqinile bekulokhu kuvame kakhulu emizini, kepha abantu abaningi bayadangala ngenxa yentengo ephezulu. Eqinisweni, lapho ...